Pogba oo raali galin u jeediyay Gianluigi Buffon, kadib markii uu arintan sameeyay – Gool FM
(Manchester) 18 Jan 2019. Khadka dhexe kooxda Manchester United ayaa amaanay saaxiibkiis David de Gea, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay goolhaayaha ugu fiican aduunka, isagoo ka doorbiday saaxiibkiis horey kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon.
David de Gea oo haatan da’adiisu tahay 28 jir ayaa bixiyay qaab ciyaareed cajiib ah kulnka Axadii lasoo dhaafay ay ku wada ciyaareen kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur horyaalka Premier League, kaasoo ay Red Devils guul ku gaartay 1-0.
De Gea ayaa ka bad baadiyay 11 kubadood xidigaha kooxda Tottenham Hotspur, inta ciyaarta ay socotay, wuxuuna kulankan ka sameeyay rikoodh cajiib ah.
Hadaba Pogba ayaa amaanay qaab ciyaareedka wanaagsan uu sameynayo David de Gea, wuxuuna aaminsan yahay in xitaa uu ka fiican yahay saaxiibkiis horey kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon.
“Xaalada aad ayay inoogu wanaagsaneyd anaga ahaan, kadib markii aan ku soo laabanay wadada guulaha, waxaan u baahneyn inaan helno dhibco, isla markaana aan muujino inaan awoodno inaan ka guuleysan karno koox weyn, ma dhahayo waxaan ahayn kuwo nasiib badan, bale nasiibka inaga ayaaba gacanteena ku sameysanay”.
“David de Gea wuxuu qabtay shaqadiisa, waana kaga mahad celinayaa arintaan, Manchester United aad ayay u fiicneyd, waxaan la ciyaarnay Tottenham, waa koox weyn ay ku sugan yihiin ciyaartoy waaweyn”.
“De Gea wuxuu ka mid yahay goolhaayaasha ugu fiican aduunka, waa hadii uusan ahayn kan ugu fiican, waqtiga aad u baahan tahay waad heleysaa, waana sababta uu u yahay kan ugu fiican”.
“Waan ka xumahay Buffon, balse laga yaabee in xitaa Gianluigi uu sidaas dhihi lahaa”.